network အတွက် IRPStackSize ပြောင်းခိုင်းလို့ — MYSTERY ZILLION
network အတွက် IRPStackSize ပြောင်းခိုင်းလို့
September 2009 edited November 2009 in Network Accessories Sale
ကျွန်တော့ network ထဲကကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ ping line ထွက်တယ် share folder ၀င်ရင် not enough server storage error ပဲပြနေလို့့ IRPStackSize ပြောင်းရတယ်ဆိုလို့ ပြောင်းတာ 14 က နေ 50 ထိသာရောက်သွားတယ် အဲဒီ error ပဲပြနေလို့ တစ်ခြားပြင်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းများရှိသေးလား? ဘယ်လိုကြောင့် အဲဒီလိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။ antivirus ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ microsoft ဖြေထားတဲ့အဖြေမှာတော့တွေ့တယ်။
အကိုရေ..အဲဒါ ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ ဆိုတာရယ်.. အဲဒါကို ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလေးတွေကို.. ပြောပြထားတဲ့. .. ဆိုဒ် ရှိတယ်..အဲဒီကိုသွားကြည့်ုလိုက်နော်.. IT Men ဘလော့မှာ ကိုသူရိန်ရေးထားတာ ရှိပါတယ်...အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်...
kaspersky 7.0 သုံးထားပါတယ်။
ဟုတ်တယ်ဗျ ကျနော်လည်းအဲဒီပြဿနာဖြစ်နေတယ် ကျနော်ကကြတော့ DeepFreeze3.0 တင်လိုက်ရင်ဖြစ်သွားတာ ပြန် uninstall လုပ်လိုက်ရင်ရသွားပြန်ရော သိသူများရှိရင်လုပ်ကြပါဦး
မရဘူးဗျ အဲဒီအတိုင်းပဲ microsoft ကရေးထားတာလဲ ၁၀ လုံးချိတ်တာ အဲဒီတစ်လုံးပဲဖြစ်တာ window ပြန်တင်ထားလဲ ပြန်ဖြစ်သွားတာ။